Mar dambe ma geli kartid dukaanka haddii aadan ku siin magacaaga iyo lambarka addoonkaaga dukaanka taasina waa uun bilowga: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 19 May 2020	• 12 Comments
"Dawladu waxay naga codsataa inaan sidan samayno waxaanan kaliya la soconayaa 'Befehl ist Befehl'. Waa inaad bixisaa magacaaga iyo lambarkaaga aqoonsiga si aad ula socoto qofka aad la soo xiriirtay. Haddii aad tan sameyn weydo, ma geli kartid bakhaarka, laakiin sidoo kale waad ku dukaamaysan kartaa khadka tooska ah ee internetka".
Way bilaaban doontaa. Waxaan saadaalinaayay talaabooyinkan booliiska ee sanadaha, laakiin hadda waxaa jira cadowga aan muuqan iyo warbaahinta NLP ee ku takhasusay barnaamijyada sida Jeroen Pauw ayaa dadka ku qanciyay mar labaad iyagoo kaashanaya siyaasiyiinta iyo khubaro, dadka intiisa badani indho la’aan ayey u yihiin taas oo bilayska bilaysku ku soo bandhigayo.
Tan waxaa loo sameeyaa talaabo talaabo ah iyo wejiyada soosocda:
“Xakamaynta qarsoon ee sirdoonka ah” (xannibaadda xarig ku haynta kaladuwanaansho khafiif ah) oo leh (badanaaba aan ka badnayn sanad-sannadeedka caadiga ah) mowjadda hargabka oo kale ah; badiyaa barnaamijyada laga sameeyay welwelka warbaahinta, tirooyinka RIVM iyo sawirro la soo saaray oo u dhexeeya dhegaha dadka
Magdhow lacageed oo lagu ilaalinayo dowladda
Hordhac hal mitir iyo badh bulshada ah iyo xakameyn lagu sameeyo ganaaxyo iyo ganaaxyo
Diyaarinta barnaamijyada, nidaamyada kamaradaha iyo xog weyn iyo ballanqaad warbaahineed si dadku u bartaan hordhaca soo socda
Yaraynta fududeynta xirida si loo ilaaliyo taageerada dadka
Sarakicidda fayraska laakiin bilow dhab ah oo leh malaayiin qaddar muuqata oo dhimasho ah (bioweapon ama haddii kale)
Quful adag iyo tallaabo adag oo booliis ah, oo ay ka mid yihiin karantiil khasab ah iyo wareegyo
Markaa qofkasta oo qaatay fayruus aad u fudud, qofkii ku baaqa in xannibaadda kor loo qaado, iyo qof kasta oo dareema inay ku sifoobeen soo bandhigid dowlad boliis, waa la qayilayaa waxaana loo geyn karaa karantiil ama dib-u-celin waxbarasho. Kadib liistada qaab kasta oo tikniyoolajiyad farsamo ah, shahaadooyinka dijitaalka ah (ee ku xidhan jidhkaaga) iyo soo bandhigista lacagta lambarrada raad ahaan loo adeegsan karo waxaa lagu fulin karaa xawaare sare iyo (robot) marwada miiska waxaa lagu bedelay scanner iyo irrid.
Arrimaha aad gacantaada ku gasho iyada oo loo marayo dimuqraadiyadda tooska ah hana sugin illaa uu ka daaho: www.fvvd.nl
Video: riix halkan
Tags: Fayruuska corona, Covid-19, wejiyada, featured, intelligente, xirid, gobolka booliska
19 May 2020 ee 10: 43
Ku socota akhristaha. Wax sax ah maanta samee. Waa lama huraan. Saxiix arjiga Martin maxaa yeelay kuma noolaanno dimoqraadiyad dhab ah iyo sharciga dhabta ah.
19 May 2020 ee 11: 44
New Zealand (Boqortooyada Midowday) waxay u dhacdaa si furan, halkan waxaay ku dhacaan si qunyar socod ah
Super-ka ugu weyn ayaa horey u haystay dhammaan xogta ay kujirto nidaamkooda Bullshit, wajiga aqoonsigu sidoo kale wuxuu ku jiray meesha sare muddo dheer, maxaa yeelay laguma xusin warbaahinta micnaheedu maahan inay leeyihiin waqti dheer iyo mid ballaaran. (Waxay lahaan jireen waqti dheer)
Cadow aan la arki karin ayaa weerari kara, difaaci kara kuna qasbi kara qawaaniinta jiho kasta, wax walba !!! maxaa yeelay isagu waa wax aan la arki karin.
Haddaba ciyaartan mar kale
Midho ayaa qoray:
19 May 2020 ee 11: 45
Dadaallada noocan oo kale ah ayaa ka soo baxa meel kasta, laakiin waxaa xusid mudan in ay adduunka oo dhan ka dhacayso.
Tusaale ahaan Thailand: https://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2020/05/18/malls-deploy-robots-tracing-app-for-new-normal-shopping/
JorisTruth ayaa qoray:
19 May 2020 ee 20: 56
20 May 2020 ee 09: 52
Maaskaro Wajiga: Astaan ​​Awoodda leh ee Cadaadiska COVID
Waana la saxeexay!
20 May 2020 ee 12: 19
Waan ognahay doorka IBM inta lagu jiro Dagaalkii Labaad ee Adduunka, hadda waxay rabaan inay calaamadiyaan qof walba "K (MAYA) Aqoonsiga W" Ka fikir ID2020
Wax walba waxay ku socdaan blockchain…
20 May 2020 ee 14: 29
astaan ​​fiican oo ku taal goobta kulanka IBM Blockchain ee kulanka "Hal aqoonsi aduunka" miyaad sidoo kale leedahay ikhtiyaar ka bixitaan ah?
20 May 2020 ee 14: 38
Maaddaama ururradu ay raadinayaan habab nabadgelyo iyo hufnaan leh oo ay ugu adeegaan howlahooda cusub ee muuqaalka cusub ee jahawareerka bulshada, bilowga ayaa dhistay goob ay dadka ka caawiso inay ku xaqiijiso faahfaahintooda shaqadooda qaab aamin ah ayaa ku dhawaaqaya wareegyo maalgalinta koritaanka.
Wada-hawlgalayaasha bulshada ayaa ku heshiiya nidaamka hawlgabka cusub
Sida uu qoray wargaysku, markii aad hawlgab noqoto, waxaan eegaynaa inta ku jirta dherigaaga shaqsiyeed. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira lacag dheeraad ah, oo ku saleysan soo laabashada la filayo ihttps: //www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5128161/pensioen-pensioenakkoord-casino-beleggings natiijada-rekenrententen sannadaha soo socda.
haa waxaan wajahaynaa mustaqbal dystopian orwellian
20 May 2020 ee 13: 08
Maxay u tahay waddan munaafaqiin ah oo ay u baahan yihiin 'kuwa fikirka badan'. Zum kotzen.
20 May 2020 ee 13: 52
canab cajiib ah in Weird Duk mid ka mid ah? Waxaan u malaynayaa ...
20 May 2020 ee 18: 08
La yaab iguma noqon doono in Duk yahay mid iyaga ka mid ah.
Hadduusan ahayn, waxaa ansixiyay guddiga doorashada. Taasna si dhakhso leh uma dhex mari doontid.
Adriaan W ayaa qoray:
21 May 2020 ee 13: 17
La yaabi waxa saxda ah ujeedada masaafada 1,5 mitir ee bulshada ay tahay, haddii mustaqbalka dhow dadku ay aad uga sooci doonaan is-ilaalin elektaroonig ah, ilaalin.
Hanjabaad kale, yareyn yar laakiin aan ka yarayn aasaaska, ayaa wajaheysa dimoqoraadiyad xor ah. Si toos ah ugu xidhan saamaynta teknolojiyada, waxay ku saabsantahay soo ifbixida tartiib tartiib ah bulsho sii koontaroola oo diiradda saarta. Bulsho noocaas ah waxaa xukumi doona hoggaamiye aqoonyahano ah oo sheegashadiisa awoodda siyaasadeed ay ku xirnaan doonto sida lagu sheegayo aqoonta saynis ee sare. Iyada oo aan la iloobin caqabadaha heerarka dhaqan ahaan deeq-bixiyeyaasha, hor-u-kacayaashani kama labalabeyn doonaan gaaritaanka himilooyinkooda siyaasadeed iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka casriga ah ee ugu dambeeya si ay saameyn ugu yeeshaan dabeecadda dadweynaha oo ay bulshada ugu hayaan kormeer iyo xakameyn dhow. Duruufaha noocaas oo kale ah, dalka heerka sayniska iyo teknolojiyadda lagu noqon maayo, laakiin dhab ahaantii waxay ku quudin doontaa xaaladda ay ka faa'ideysato.
… Qalalaasaha bulsheed ee joogtada ah, soo bixitaanka shaqsiyaad muqaddasnimo leh iyo dhiig-miirashada warbaahinta guud si loo helo kalsooni guud waxay noqon kartaa talaabooyin isbadal burburin ah oo Mareykanka ka dhacay oo ah bulsho si weyn u maamusha.
« Miyay adkaanta Trump ee Shiinaha ku wajahan bilowga dhicitaanka doolarka iyo burburka dhaqaalaha?
Immisa qof oo reer Dutch ah ayaa wali bixin kara biilashooda inta lagu gudajiro qalalaasaha Corona? »
Wadarta booqashooyinka: 2.460.639
SandinG op Hoos u dhaca weyn ee lacagta inta lagu jiro xiisadda corona waxay horseedaa sicir barar: waa xalka bitcoin?
Martin Vrijland op Awoodda isbeddelka waxay ku bilaabmaysaa daadinta cabsi, barnaamijyo iyo khiyaanooyin been ah waxayna isu beddelaysaa kacaan run ah
Martin Vrijland op Masruufka ka dhanka ah Arimaha Dowlada Jordie Zwarts ayaa lagayaabaa tan, laakiin wax guul ah ma gaaro